Ụzọ 10 Iji Mee Ka Ecommerce Sales Gị Gosiri ya site na Semalt
N'ezie, ndị na-ere ahịa azụmahịa eCommerce na-eme nnukwu egosite na ngwaahịa ha. Nnyocha a na-adịbeghị anya site n'aka Statista egosiwo na ahịa ahịa eCommerce zuru ụwa ọnụga-aba n'ime dolla 2.86 dolla US n'afọ 2018. O di nwute na ị bụghị naanị ịmepụta eCommerceechekwa na ndi ahia choro iju mmiri gi. Ọ ga-adị mkpa ịmalite ịkwalite mgbasa ozi ahịaiji dọta mmasị ndị ahịa.
Ozi ọma ahụ bụ na site na atụmatụ ahịa azụmaahịa nke Semalt Digital Services na-egosimekwuo ahia eCommerce gị. Ivan Konovalov, Onye Nlekọta Ihe Nlekọta Ndị Ahịa nke Ọkachamara , na-enye ndụmọdụ dị mkpana uzo usoro eCommerce na-echekwa kwesiri iji mezuo iji nwee mmeri.
1. Jiri ire ere na ire ere
Ịzụ ahịa na ire ere na-ejide n'aka-ụzọ ọkụ nke ị nwere ike isi rụọ ọrụ iji mụbaa ahịa n'ịntanetị. Cross-erebụ ụzọ nke ịmepụta ngwaahịa ndị metụtara na ihe onye ahịa na-atụle ịzụ. Ọ na-enye aonye ahịa nwere ọtụtụ ihe ndị na-arụkọ ọrụ ịhọrọ. Ịzụ ahịa na-ere ihe ka mmaụdị ngwaahịa nke onye ahịa na-azụ. Usoro a na-enye onye ahịa gị ohere ịhụ ngwaahịa ahụnwere atụmatụ dị elu na ọnụahịa dị elu.
Azụmahịa ndị a iji gbaa ndị ahịa ume ịzụta ngwaahịa ndị ọzọ. Eziokwu bụ na mgbendị ahịa na-ahụ karịa ihe ha chọrọ, a ga-akpali ha ịzụta ihe. Ọtụtụ nchọpụta egosiwondị ahịa na-ere ahịa na-ere ahịa ma na-ere ahịa na-agba ndị ahịa ume ịlaghachi maka ihe ọzọ.
2. Meziwanye Ihe Nlekọta Okpukpe Gị
Na afọ dijitalụ nke ụbọchị a, ịkwesịrị ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ omenala iji dọta ma tinye ndị ahịa nwere ike. GịeCommerce store bụ akụkụ nke ụlọ ọrụ, na ya imewe ga-egosipụta otú ọkachamara gị ika bụ.N'ezie, mgbasa ozi nkwado gị kwesịrị ịmalite site na ụlọ ahịa gị. Ndị ọkachamara na-ekpo ọkụ na-ekpughe iheeziokwu ahụ bụ na ndị ahịa na-ezerekarị ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ọ bụrụ na ọ dịchaghị mkpa iji ahazi omenala.
Ịmepụta ụlọ ahịa eCommerce nke ọma bụ ihe dị mkpa iji merie ndị asọmpi. Ọ bụrụ na ịna-eme atụmatụ ichegharị ụlọ ahịa gị, wee jide n'aka na ọ nwere mmemme na-emeghachi omume, nke na-enye ndị ahịaọmarịcha ahụmahụ ahịa. N'ezie, ị ga-achụpụ ahịa ndị ọzọ mgbe ị na-eme ka ọ dị mfe maka ndị mmadụnyochaa ma chọta ngwaahịa na weebụsaịtị.
3. Mee ka n'Ịntanet gị na enyi gị
N'ime afọ ole na ole gara aga, ọtụtụ mbadamba mbadamba na smartphones abiala n'ahịa.wusiri ọnụ ọgụgụ nke ndị na-ere ahịa n'Ịntanet. Nnyocha na-egosi na ọnụ ọgụgụ ndị na-ere ahịa na-eregharịagafewo nke ojiji nke desktọọpụ. Na oge dijitalụ a, na-eme ka ụlọ ahịa gị eCommerce zuru okena ngwaọrụ mkpanaka dị iche iche bụ akụkụ dị oké mkpa nke azụmahịa gị.
Ọbụna Google na-agbasapụ mkparịta ụka nchọgharị maka ebe nrụọrụ weebụ na-egosipụta n'ụzọ kwesịrị ekwesị na ngwaọrụ mkpanaka.Iji mepụta nsụgharị ekwentị nke ebe nrụọrụ weebụ gị ugbu a ị nwere ike iji ngosipụta ma ọ bụ mobileplugins. Ịmepụta ụlọ ahịa enyi eCommerce bụ enyi dị mma bụ ụzọ dị mma i nwere ike isi jiri gosipụta azụmahịa gịnye ndị na-ere ahịa na mobile. Ebe ị na-enwe nchekwa ekwentị, ị ga-eme ka ọnụ ọgụgụ ndị a tọghatara gbasaa ma mụbawanye ahịa.
4. Jiri Ngwa Ngwaahịa nke Ezi Mma
Ejila ihe oyiyi ngwaahịa ọ bụla na-agbanye iji tinye ihe oyiyi. Ngwa 'ngwaahịa' gị kwesịrị inweakwa mma. Ọ bụ eziokwu na ịnweta ngwaahịa ọkachamara ihe oyiyi nwere ike ịbụrụ ọrụ siri ike, maọ bụkwa eziokwu na ha nwere ike inye aka na-adọta ndị nwere ike ịnweta ụlọ ahịa gị. Ndị ọkachamara anyị egosipụtala ọtụtụoge nke na-agbakwụnye ihe oyiyi doro anya na nhọrọ mbugharị na-agba ndị ahịa nwere ike ịzụta ngwaahịa.
5. Na-achọpụta Ngwaahịa Ngwaahịa
Nkọwapụta ngwaahịa gị nwere ike ịrata ndị ahịa iji zụọ ihe. Jide n'aka naị kọwapụtara njirimara bara uru nke na-eme ndị ahịa mmasị. Na-akwali ha ka ha gbadaaihe nkedo. Ebe kachasị amasị eCommerce dị ka Amazon na-egosipụta atụmatụ atụmatụ ngwaahịa ha iji melite ahịa.
A ghaghị ịkọwa nkọwa dị iche iche ka onye ọ bụla nwere ike ịchọta ya gụọ yaime ihe. Ị nwere ike iji obere bọmbụ dị mkpirikpi igosi ihe njirimara nke ngwaahịa a. Enweghị mgbagha ọ bụlana ị ga-efu na ọtụtụ ahịa mgbe nkọwa ndị kwesiri ịgba gị umendị ahịa na-azụta ihe zoro ezo na nkọwa.
6. Mepụta Ngwa Mgbasa Ngwa Ngwaahịa
Mgbasa ozi vidiyo bụ usoro ahịa ahia dị iche iche nke ọtụtụ ụlọ ahịa eCommerce, eji mee ihemụbaa ahịa. Ndị na-ere ahịa taa na-eji aka na-elegharị anya na-ahọrọ vidiyo karịa ụdị ndị ọzọnke ọdịnaya. Mepụta vidiyo obere nkwado nke ngwaahịa gị, gụnyere ihe dị mkpaatụmatụ nke ngwaahịa gị nke nwere ike ịdọrọ uche ndị ahịa. Debe vidio ndị a na ibe weebụ dị iche iche.
I nwekwara ike bulite vidio vidiyo na saịtị niile vidio a na-ewu ewu ka iwelie mgbasa. Emelachefuo ibuli vidiyo gi maka SEO site na igbakwunye mkpado gaa na vidiyo na nkọwa. Ịnwere ike ịgbakwunye adreesị weebụ gị dị ka ederede na nkọwa ịkwọ ụgbọala.
7. Mepụta Mmetụta Uru Dị Mkpa
Di iche iche dị iche iche dị na eCommerce ubi na-eme ka ọ sie ike maka ụlọ ọrụka ha wepụ onwe ha pụọ ​​n'egwuregwu ahụ. N'agbanyegh i ot 'ui si eche echiche banyere ihe nd ii ji eme ihebụ, ma eleghị anya, ụlọ ahịa ọzọ dị n'ebe ahụ, nke na-enye otu ihe ahụ ma ọ bụ yiri yangwaahịa na ahịa gị. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe, gịnị ka ị ga - eme iji mee ka ika gịna-agbapụta site na ọtụtụ puku ndị ọzọ ụdị? Nhọrọ bara uru pụrụ iche bụ ihega-eme ka ika gị dị iche. Ịkwesịrị ịdepụta uru bara uru pụrụ iche nke na-ekwuuru gị ngwaahịa. Na-enye ya, ị ga-enwe ike ịsọ mpi, ma nweta uru nke nduzi.
A pụrụ itinye ihe ngosi pụrụ iche pụrụ iche n'ime ụlọ gị, ngwaahịa na mgbasa ozipeeji nke iji mee ka ọnụego ntọghata. Inwe ihe omuma banyere ihe na-eme ka ika gi di iche icheụdị ga-enyere gị aka ịme ahịa azụmahịa eCommerce. Usoro a nwere ike inyere gị aka ịhapụ gị ndị na - akwado gị.
8. Inye Mweghachi na Mfe
Usoro ahịa a nwere ike ịkpali ndị ahịa nwere ike ịzụta n'aka gị ma melite ahịa n'ụzọ ọhụụ.Ngwa ahịa ngwaahịa a enyerela ọtụtụ ụdị eCommerce aka iji nweta obi ike nke ndị ahịa ma mee ka ha dị njikere ịlaghachi maka ihe ndị ọzọ.
Ntanetị azụ ahịa azụmaahịa na-emekarị na azụmahịa eCommerce, ndị ahịa ga-alọghachikwa ngwaahịaha zụrụ site n'oge ruo n'oge. Onye ahịa gị nwere ike ikpebi ịlaghachi ngwaahịa nke mebiri emebima ọ bụ na ọ dabara nke ọma. Ndị ahịa na-alaghachi site na otu n'ime ngwaahịa atọ. N'ezie, nkeọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ahịa na-enyocha iwu nlọghachi tupu ha emee nzụta.
Ọ bụrụ na ndị ahịa nwere ike ịmara na ha nwere ike ịghaghachi ahịa, ọ ga-abụ na ọ ga-emelaghachi azụ. Nnyocha nke Wall Street Journal na-eme gosiri na nke kacha mmandị ahịa nwere ọnụ ọgụgụ kachasị elu. Mmezu nke iwu a n'ime gịomume ga - enyere gị aka izere ịhapụ nnukwu ahịa na ohere azụmahịa.
9. Gosi Ngwaahịa na Ụlọ Gị
Ebe obibi gị bụ otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke ebe nrụọrụ weebụ gị eCommerce ka ị weejiri ya mee ka ndị ahịa gbaa aka. Gosiputa ngwaahịa kacha mma nke na-ere ahịanwere ike ịhụ ha n'ụzọ doro anya. O yikarịrị ka onye ọ bụla na-azụ ahịa nke na-abịa ụlọ ahịa eCommerce gịsite na ibe ndi ozo nwere ike kpebie ileta ibe akwukwo iji hu ihe ndi ozo. Ya mere, ịtụkwasị gịihe kachasị ewu ewu na ngwaahịa ụlọ na-akwụ ụgwọ ahịa.
10. Inye otutu nzipu nzipu
Inye ndị ahịa nwere ọtụtụ nnyefe nhọrọ ga-eme ka ahịa gị dịkwuo elu. N'ụzọ dị ịtụnanya,mana ulo ahia nke na-ere ihe ndi ruru eru na-enye ezigbo ihe omumu n'anwetana-akụzakarị mgbe ọ na-abịakwute nnyefe. Ọ bụrụ na ị na-aga na-akpali ndị ahịa ịzụta sigị, mgbe ahụ dị njikere ịnye ọtụtụ nnyefe nhọrọ. Ụdị ahia ahịa dị otú adị mfe ịrụ ọrụ, mana ọ na-enyere gị aka izere ịchụpụ ndị ahịa nwere ike ịhapụ ndị na - asọmpi gị.
O doro anya na Intanet agbanweela ụzọ ndị mmadụ si achọ ma zụta ngwaahịa. Ndị aụbọchị na desktọọpụ ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaaka ị nwere ike ịzụta ihe ọ bụla ị chọrọ online. Ndị mmadụ bụenwekwu ike isonye na ahia eCommerce. Iji nọgide na-agba ọsọ nke ịrị eluewu ewu nke ịzụ ahịa n'ịntanetị, ị nwere ike ịkọ aka na enyemaka ọkachamara nyere gị Ụlọ ọrụ Semalt Digital Source .